Gnome 3.34 dị, mara ihe dị ọhụrụ na ụdị ọhụụ | Site na Linux
Gnome 3.34 dị, mara ihe dị ọhụrụ na ụdị ọhụrụ ahụ
Mgbe ọnwa isii nke mmepe, n'oge nke ha kpughere ntakịrị banyere mgbanwe na akụkọ banyere ụdị ọhụrụ nke gburugburu desktọọpụ Gnome, emepụtara ọhụụ ọhụrụ "Gnome 3.34" ụbọchị ole na ole gara aga. Tụnyere nke gara aga tọhapụ, e mere mgbanwe mgbanwe dị ka puku 24, na mmejuputa nke ndị mmepe 777 sonyere onye rụrụ ọrụ na mpaghara dị iche iche nke desktọọpụ.
Na mbata nke ụdị ọhụrụ a nke gburugburu ebe obibi Gnome 3.34 nke isi akwukwo ohuru na-apụta ìhè otu n'ime ha bụ ikike iji rụọ ọrụ mwepụta nke XWayland na njikwa window Mutter mgbe ị na-achọ ịgba ọsọ ngwa dabere na protocol X11 na eserese eserese dabere na usoro Wayland.
Ihe dị iche na omume nke nsụgharị nke Gnome bụ na tupu XWayland akụrụngwa na-agba ọsọ mgbe niile ma chọọ mmalite mbido (malitere mgbe a malitere ịmalite oge Gnome) ma ga-amalite ugbu a n'ụzọ dị omimi mgbe achọrọ ihe ndị ahụ iji hụ na ndakọrịta X11 .
Versiondị nsụgharị ọhụrụ nke Mutter na-agbakwunye nkwado maka nkwekọrịta KMS API ọhụrụl (Atomic) (Atomic Core Mode Settings) iji gbanwee usoro vidiyo, na-enye gị ohere ịlele nhazi nke nkeji tupu ị gbanwee steeti ngwaike n'otu oge, ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa, gbanwee mgbanwe ahụ.
Ihe ohuru na Gnome 3.34
Gnome Boxes na-eji igbe mkparịta ụka dị iche mgbe ị na-agbakwunye njikọ dịpụrụ adịpụ ma ọ bụ njikwa mpụga. Mgbe ị na-ekepụta igwe eji mepụta ihe ọhụụ, a na-ekewa okwu mkparịta ụka n'ime ngalaba atọ: Achọpụtara Akwụkwọ, Ihe Nbudata Na-amasị, na Nhọrọ Nhọrọ.
A gbanwere ọnọdụ nrụnye Windows Express iji jiri onyonyo iso CD-ROM kama inyoghi inyoghi. Agbakwunyere nkwado maka itinye igwe arụmọrụ dị ugbu a site na onyonyo CD / DVD agbakwunye (dịka ọmụmaatụ, iji malite gburugburu mgbake ọdachi). Agbakwunyere nhọrọ iji mee / gbanyụọ 3D osooso na akụrụngwa nke igwe arụmọrụ.
Na nyocha nyocha, enwere ike ikpokọta akara ngosi ngwa n'ime folda. Iji mepụta folda ọhụrụ, dọrọ otu akara na nke ọzọ. Ọ bụrụ na enweghị akara ngosi fọdụrụ na otu ahụ, a na-ehichapụ folda ahụ na-akpaghị aka.
Emegharịrị ụdị ụdị ọnọdụ nyocha, gụnyere imewe ọhụụ maka ogwe ọchụchọ, ubi iji tinye paswọọdụ, yana oghere windo
Epiphany (Gnome Weebụ) ugbu a gụnyere iche sandbox nke nhazi ọdịnaya weebụ na ndabara. Ndị ọkwọ ụgbọ ala ugbu a nwere oke naanị site na ịnweta ndekọ aha dị mkpa maka ihe nchọgharị ahụ na-arụ ọrụ. Agbakwunyere ike ịpị taabụ (ntanye pinning).
Emelitere ad blocker, nke na-eji ngwaọrụ nzacha ọdịnaya nke WebKit nyere ugbu a. E degharịrị nhazi nke peeji nchịkọta, nke mepere na taabụ ọhụrụ. Ọrụ njikarịcha emere maka ngwaọrụ mkpanaka.
GNOME Music agbakwunyela nsuso nsụgharị, dị ka ndekọ egwu na ndekọ ụlọ, iji chọpụta faịlụ ọhụrụ ma ọ bụ gbanwere n'ime ha ma melite mkpokọta na akpaghị aka. Edegharịrị akụkụ nke ngwa ahụ nke ọmae, nke mere ka o kwe omume itinye usoro nkwụsịtụ na-akwụsị akwụsị n’etiti egwu egwu. Mbido peeji nke emelitere na ndepụta ọkpụkpọ, ọba na ozi gbasara onye egwu ahụ
Na nhazi, a na-ewepụta panel nhọrọ ahọpụtara ahọpụtara, ebe enwere ike ihuchalu akwụkwọ ahụ aja na desktọọpụ na sistemụ mkpọchi sistemụ. Gbakwunye bọtịnụ "Tinye Foto ..." ọhụrụ iji tinye ihe oyiyi nke gị dị ka akwụkwọ ahụaja.
Na Sysprof, ngwa ọrụ eji arụ ọrụ sistemụ arụmọrụ, arụgharịala ihu na usoro profaịlụ dịwanye oke. Ejikọtara ya na GJS, GTK na Mutter. Agbakwunyere agbakwunyere data, gụnyere ikike iji nyochaa ike oriri.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịmatakwu banyere mwepụta a, ị nwere ike lelee njikọ ndị a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Gnome 3.34 dị, mara ihe dị ọhụrụ na ụdị ọhụrụ ahụ
Ndị mmepe KDE na-arụ ọrụ iji meziwanye nkwado maka Wayland
Richard Stallman: karịa na arụkwaghịm ya